စန္ဒာ၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
မိန်းကလေးPyin Oo LwinMyanmar Like3members like this
ဘလော့များ (20)ဆွေးနွေးချက်များ (11)အဖွဲ့များ (7)ဓါတ်ပုံများ (68)Photo Albumsဗွီဒီယိုများ စန္ဒာ's Likes စန္ဒာ's Groups
Started this discussion. Last reply by thantzinwin Oct 8, 2011. 1 Reply
အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး မင်္ဂလာပါ...ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးပြီ ဖြစ်ပါသဖြင့် ယခင်ကအတိုင်း ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းအသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ပြင်ဆင်နေချိန်တွင် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ပေါ်မှုများကိုလည်း သည်းခံပေးကြသည့်အတွက် ကျေးဇူးများစွာတင်ကြောင်း ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်မှ တာဝန်ရှိသူများက လေးစားစွာဖြင့် ပြောကြားလိုပါသည်။အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး စိတ်ချမ်းသာ၊ကိုယ်ကျန်းမာပြီး ဘ၀နှင့်ဆန္ဒ ထပ်တူကျနိုင်ကြပါစေ။ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... အားလုံးကြည့်ရန်...
လာလည်ကြသော ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ.........
Sunday Dhamma School ဖြစ်ပေါ်လာရေး
ဒီဘလော့ကို October 7, 2011 တွင်9:30am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 26 Comments
ဒီဘလော့ကို September 22, 2011 တွင်11:41am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 18 Comments
ဒီဘလော့ကို September 9, 2011 တွင်8:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 59 Comments
ဒီဘလော့ကို August 24, 2011 တွင်4:16pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 12 Comments
ဒီဘလော့ကို August 24, 2011 တွင်4:04pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။5Comments
ဒီဘလော့ကို August 24, 2011 တွင်3:32pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။7Comments
ဒီဘလော့ကို August 24, 2011 တွင်3:15pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments
ဒီဘလော့ကို July 25, 2011 တွင်12:13pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments
ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် စိပ်ပုတီး
ဒီဘလော့ကို July 16, 2011 တွင်2:30pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments
တစ်ဘဝ သာသနာ ကျမ်းပြုအကျော် ဆရာတော် ဦးဃောသိတ(မိုးကုတ် မဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ)၏တရားတော်များ
ဒီဘလော့ကို July 12, 2011 တွင်12:54am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။5Comments
ဒီဘလော့ကို July 11, 2011 တွင်7:34pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။5Comments
ဒီဘလော့ကို June 20, 2011 တွင်11:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments
ဒီဘလော့ကို June 20, 2011 တွင်1:52pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments
ဒီဘလော့ကို June 10, 2011 တွင်10:29pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 13 Comments
ဒီဘလော့ကို June 2, 2011 တွင်1:32pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments
ဒီဘလော့ကို May 30, 2011 တွင်8:47pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 8 Comments
ဒီဘလော့ကို May 30, 2011 တွင်7:28pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments
နောင်တတရားကြီး ၁ဝ-ပါး။ ။
ဒီဘလော့ကို May 23, 2011 တွင်11:11pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment
ဒီဘလော့ကို May 23, 2011 တွင်10:43pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။5Comments
ဒီဘလော့ကို May 23, 2011 တွင်9:30pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။5Comments
အားလုံးကြည့်ရန်... Comment Wall (528 comments)
3:19pm အချိန်May 4, 2013, တွင်hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ညီမလေး စန္ဒာ လုံးဝမတွေ့ ရတော့ပါ..အဆင်ပြေလား ဘာတွေဖြစ်နေပါလဲး 9:57am အချိန်April 9, 2013, တွင်dimplemit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ သာသနဟိတအသင်း၏ (၅)ကြိမ်မြောက် အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင် စိတ်ကြည်လင်စွာဖြင့် သာသနာ့အကျိုး ရွက်သယ်ပိုးနိုင်ပါစေသော် …။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:317977 1:10am အချိန်March 11, 2013, တွင်moe sandar khing မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မစန္ဒာ ကျမမှာအရမ်းနာယူကောင်သောတရားများစွာရှိပါသည် ဆိုးမှာတင်ချင်ပါသည်။ FLV ပြုလုပ်ထားပါသည်။ကိုယ်ပိုင်အပြင်မှတရားများဖြစ်သောကြောင့်တင်ရန်ခက်ခဲနေပါသည်။တင်ရန်နည်းလမ်းလေးသင်ပေးစေလိုပါသည်။ကျေးဇူးတငိစွာဖြင့်
မိုးစန္ဒာခိုင် 1:31am အချိန်March 8, 2013, တွင်zaw myint oo မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ android phone များသုံးခဲ့လို့ ပိဋကတ်သုံးပုံကိုဖတ်ချင်ရင် gmail လေးပို့ပေးလိုက်ပါခဗျာ
ကျွန်တော် softwear လေးပို့ပေးလို့ရပါတယ် ပျော်ရွှင်ပါစေ မစန္ဒာရေ။ 2:08am အချိန်December 30, 2012, တွင်စိုင်းမင်းထွန်း မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါ 2:18pm အချိန်December 13, 2012, တွင်မျိုးသက်ခိုင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အမမင်္ဂလာပါ။ 11:52am အချိန်November 28, 2012, တွင်Aung Kyaw San မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မွေးနေ့ လက်ဆောင်အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျနော်အမြဲတမ်းအင်တာနက်မထျုင်ဖြစ်လို့ အလုပ်များလို့ပါ။ ဘ၀မှာ မင်္ဂလာရှိပါစေ။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။ 4:05pm အချိန်October 30, 2012, တွင်♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ At 9:30pm on October 20, 2012, aye aye myaing gave စန္ဒာagift…Red Ribbonနေကောင်ပါသလားလာလည်သွားပါတယ် သတိရနေပါတယ်From the Gift Store 9:10am အချိန်October 18, 2012, တွင်KyawSoeMoe မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မစန္ဒာ ဒီနေ့ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ မွေးနေ့လေ ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ မွေးနေ့မှာ မစန္ဒာ ထာဝရကျန်းမာပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။ 9:52am အချိန်October 9, 2012, တွင်KyawSoeMoe မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ခုမှ ပြန်ရောက်လာဖြစ်လို့ တောင်းပန်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော့်ရဲ့ ၂၀၁၁ မွေးနေ့မှာ မိတ်ဆွေတွေထဲကမှ မှတ်မှတ်ရရ တစ်ယောက်ထဲပါ ။လာရောက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့အတွက် ၀မ်းသာပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ စန္ဒာ အမြဲတမ်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ။ 2:38pm အချိန်September 1, 2012, တွင်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘာသာတရားပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှုရှိတာကို ကြိုဆိုပါတယ်၊ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဒကာမရေ......... အဓိကကတော့ အဘိဓမ္မာအကျင့်တရားနဲ့ နိဗ္ဗာန်လမ်းကို မြန်းဖို့နော်...။ ပန်းတိုင်ကို လှမ်းကိုင်နိုင်ပါစေ....။ 2:36pm အချိန်September 1, 2012, တွင်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့် သူ၏လမ်းစဉ် “ငါ၏တရားကို ပုဂ္ဂလိကကြည်ညိုမှုဖြင့် လက်မခံကြကုန်လင့်၊ ရွှေကို မီးဖြင့်စမ်းသက်သကဲ့သို့ ငါ၏တရားကိုလည်း စမ်းသက်ကြကုန်လော့”ဟု လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင့်ငါးရာကျော်က အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် မြတ်ဗုဒ္ဓမိန့်ကြားတော်မူခဲ့သည်။
အကျိုးတရား+အကြောင်းတရား မျှတစေရန်...။ ခန္ဓာကိုယ်ချမ်းသာ+စိတ်ပင်ပန်းအဆင်းရဲခံမှုဟူသော အစွန်းရောက်တရားတို့ကို မဇ္ဈိမပဋိပဒါ၊ ယောနိသောမနသိကာတို့ဖြင့် မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည့်အပြင် ”ယုံကြည်စရာ ယုံကြည်တာ သဒ္ဓါဖြစ်တော့သည်။ မယုံကြည်စရာ ယုံကြည်တာ အညာမိတော့သည်။”ဟု အနာဂတ်ဘ၀,သံသရာတို့တွင် ရွေးချယ်မှုမမှားစေရန်လည်း ဆုံးမတော်မူခဲ့သည်။
သဒ္ဓါလွန်ကဲ၊ ပညာနည်း၊ တလွဲ ယုံတတ်သည်။ ပညာလွန်ကဲ၊ သဒ္ဓါနည်း၊ စဉ်းလဲကောက်ကျစ်သည်...။ဟု မျှတမှုဖြင့် ရှုမြင်ကြရန်၊ ဆင်ခြင်တုန်းတရားဖြင့် တွေးခေါ်ကြံစကြရန်၊ ဓမ္မလမ်းကြောင်းမှ သွေဖယ်မသွားကြစေရန်တို့ကိုလည်း ညွှန်ကြားပြသတော်မူခဲ့သည်။
ပုဂ္ဂလဇ္ဈာသယ- သတ္တ၀ါတို့၏ အလိုဆန္ဒကိုသိခြင်းနှင့် ဒေသနာဝိလာသ-စကားပြောကောင်းခြင်း အတတ်ပညာတို့ကိုလည်း လိမ္မာကျွမ်းကျင်တော်မူသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် အရှင်စူဠပန်-စသော ရဟန္တာမထေရ်မြတ်တို့ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ စိုက်ကပ်တော်မူနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာအားဖြင့်- သစ်ပင်တက်သူကို ရေကူးခိုင်းရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။)
အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) 3:17am အချိန်August 16, 2012, တွင်အရှင်အာစိဏ္ဏ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မမစန္ဒာ လာလည်ခဲ့ပါတယ် ဘလော့တွေကအရမ်းကောင်းတယ်နော် 5:44pm အချိန်August 12, 2012, တွင်hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မတွေ့ တာကြာလို့လာလယ်သွားပါတယ် 7:45pm အချိန်August 2, 2012, တွင်Aung Kyaw San မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မစန္ဒာ ထပ်တူညီမျှ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။ဖွင့်ကြည့်တာနောက်ကျသွားပါတယ်။ 1:13am အချိန်July 16, 2012, တွင်aungaung မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ 12:16am အချိန်July 9, 2012, တွင်ဇင်မင်းမောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အခုမှ ရှာဖွေရင် တွေ့တာပါ အစ်မ side က ဘုရားပုံတွေ ပူဇော်ချင်ပါတယ် ကျေးဇူးပြုပြီး ပို့ပေးပါလာခင်ဗျာ 12:46pm အချိန်July 4, 2012, တွင်ရှင်ပညာဇောတ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါဒကာမလေးကိုရင်လည်တယ်နော်ကိုရင့်ဆိလဲလာလည်နော် 8:59am အချိန်June 30, 2012, တွင်ဦးကောက် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါ...သမီးရေ...ဦးလာလည်သွားပါတယ် မှတ်ချက်ရေးသားတဲ့သူလုံးဝမရှိသေးပါ။
Top News · Everything aung aung soe commented on dimplemit's blog post 'ဒုက္ခများမြောင် လူတို့ဘောင်ဝယ်'"မိုးလင်းကမိုးချုပ် မျက်လုံးမှိတ် လိုက်တဲ့အချိန် အတွင်း အပူ…"9 minutes agodimplemit leftacomment for ဖိုးသားကြီး"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"12 minutes agodimplemit leftacomment for ရှင်ဧသိကဓမ္မ (ကန့်ဘလူ)"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"13 minutes agodimplemit leftacomment for ဇော်ဇော်ဦး"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"15 minutes agodimplemit leftacomment for မြတ်ကိုကိုဟန်"ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်…"19 minutes agodimplemit leftacomment for thatnaing"ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်…"20 minutes agoMyaenu Kyun postedablog postလူ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့် နတ်ပြည်ရောက်သူများမိမိရဲ့ Term Paper စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ စာအုပ်ကတော့ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့်…See More24 minutes ago 0
dimplemit leftacomment for သူရိန်နေမင်း"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"24 minutes ago၄၄၂ဇော်နိုင် commented on မူကြိုဆရာ's blog post 'သေရမှာကြောက်သူ (၄) ဦး နှင်. သေရမှာ မကြောက်သူ (၄) ဦး'"မှတ်သွားပါတယ်ဗျာ"27 minutes agoHtain Lin Oo liked thein wai's blog post '“ ငါက ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင် တိပိဋကဓရ ” တဲ့ (ကပိလ သုတ္တန်)။'54 minutes agoHtain Lin Oo commented on dimplemit's blog post 'ဒုက္ခများမြောင် လူတို့ဘောင်ဝယ်'"ွGood, appreciate it."1 hour agoHtain Lin Oo liked dimplemit's blog post 'ဒုက္ခများမြောင် လူတို့ဘောင်ဝယ်'1 hour ago More... RSS